पवनदीप राजनले जिते इन्डियन आइडल-१२ को उपाधि – Kavrepati
Home / मनोरंजन / पवनदीप राजनले जिते इन्डियन आइडल-१२ को उपाधि
admin August 16, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 387 Views
पवनदीप राजनले १२ औं संस्करणको गायन रियालिटी शो इन्डियन आइडलको उपाधि जितेका छन्। आइतबार भारतको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर भएको फाइनलमा राजनले बाजी मारेका हुन्।
उनले सनमुख प्रिया, अरूणीता कांजीलाल, मोहम्मद दानिश, निहाल ताउरो र सायली काम्बलेलाई भोटमा पछि पार्दै अवार्ड उचालेका हुन्। २४ वर्षे पवनदीप राजनको जन्म भारतको उत्तराखन्ड कुमाउँको सानो जिल्ला चम्पावतमा भएको थियो ।
गायनमा मात्र नभएर उनी वाद्यवाधन मा पनि उत्तिकै पोख्त छन्। उनी गितार, ढोलक, तबेला, हार्मोनियम, पियानो, ड्रमलगायत धेरै किसिमका बाजा बजाउँछन्।
अन्य समाचार : संसारभर किन बढिरहेको छ ‘बिटिएस’ को लोकप्रियता? दक्षिण कोरियाली म्युजिक ब्यान्ड ‘बाङतान सोन्योन्दान (बिटिएस)’ ले संगीत क्षेत्रमा लगालग इतिहास बनाउदै छ। ब्यान्डले विभिन्न समय आयोजित विभिन्न म्युजिक अवार्डहरूबाट सम्मान पाइरहेको छ भने ब्यान्डको चर्चा पनि चुलिँदो छ।
पाउलोको ट्विटरमा एक करोड ५४ लाख फलोअर्स छन्। बिटिएसको आधिकारिक ट्विटरमा तीन करोड ४६ लाख फलोअर्स छन्। यसरी करोडौं फलोअर्स कमाएर लगालग विभिन्न श्रेणीमार्फत आफूलाई चिनाउँदै आएको बिटिएस आखिर को हुन्? कसरी एकाएक चर्चामा आए?
नेपालमा पनि बिटिएसको ‘क्रेज’ बढिरहेको छ। बिटिएससँगै यतिबेला के-पप ब्यान्ड ब्ल्याकपिंक, सुपर जुनिअर, सिनीलगायत ब्यान्ड नेपालमा लोकप्रिय बन्दै छन्। नेपालका के-पप फ्यानहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामहरूमा पेज बनाएर समेत आफ्नो समर्थन गरिरहेका छन्। गीत-संगीतको क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालमा कोरियन खाना र पहिरन पनि फस्टाउँदै गएको छ। कोरियन रेस्टुरेन्टका साथै थुप्रै युवा पुस्ताहरू कोरियन फेसनलाई पछ्याइरहेका छन्।
Previous १ नम्बरले फेल भएकी छात्रा पुलमुनि मृत भेटिइन्, मरिसकेपछि विश्वविद्यालयले पास गरिदियो
Next पत्रकारले आफैंले ….लिएको अन्तरवार्ता प्रसारण गरेर तहल्का मच्चाइन् : हेर्नुहोस भिडियो सहित